Noocyo Faleebo ah oo loogu talagalay Dhulka Furan | September 2019
Nidaaminta hababka iyo noocyada caanaha lo'da
Ugu Weyn Ee Noocyo Faleebo ah oo loogu talagalay Dhulka Furan
Basbaas ee dhul furan: noocyada ugu wanaagsan
Dhaqanka cadceedu waxay u timid waddamada Yurub illaa iyo qarnigii shan iyo tobnaad, waxana uu ahaa dalab weyn tan iyo markaas. Waxaa jira qiyaastii laba kun oo nooc oo dhirta ka mid ah. Isku day in aad ka dhigto basbaas iyo dhaqanka xajmiga ah, laakiin koritaanka, dadka jecel waxay ku guuleystaan ​​natiijooyin aad u weyn. Kobcinta basbaaska waxay u baahan tahay dadaal badan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyo Faleebo ah oo loogu talagalay Dhulka Furan 2019